Mafirosofi maitiro kune Divine Comedy, Dante uye kutaura kwake kwakadzama | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Bvunzo, Type, Literature, Novela
Oiri naDante Alighieri, munyori weVamwari Vamwari.
Iyo yeVamwari Vemitambo ibasa rinoburitsa pachena kusimba kwemunhu, kutsemuka kwayo, zvese zvinonamatira kuhunhu hwayo hunopfuura. Nekudaro, uye zvakafanana, zvinoratidzawo izvo zvinomuponesa kubva kwaari, chikamu chemweya chakasungirirwa kunaMwari chinomutendera kuti azvigadzirise uye akunde zvisirizvo. Zvirokwazvo, basa rinofanirwa kuve pakati pedu runyorwa rwemabhuku ekuverenga.
Dante Alighieri akazvisunungura kuti abudise basa rake gurusa; chinyorwa ichi, pasina mubvunzo, chakamuka kubva murufu, kubva kucatharsis, kubva kumunyori waro. Zvino, kuti titsanangure izvi kubva pane yakawanda mafirosofi ekuona maonero, ngatitangei kuhurukuro inotevera.
1 Zvakakosha zvinhu pabasa raDante
2 Philosophy kubva pane yetsika uye dzidziso yezvouMwari
3 Kupera, saka, ndiko kuzvinatsa uye kusvika kuna Mwari.
Zvakakosha zvinhu pabasa raDante
Kune zvinhu zvinoratidzira basa raDante uye izvo zvisingarambike, hazviite kuti zvionekwe. Magumo emunhu wese wepanyika, akafanana. Hongu, kune uyu munyori zvese zvakatogadziriswa pahupenyu hwevaya vanofamba nendege iyi. Imwe neimwe, maererano nemaitiro enyeredzi panguva yekuzvarwa kwavo, yavo yaive nemagumo akaratidzirwa.
Nekudaro, kupatsanurwa kwendege dzakasiyana dzezvemweya kunova pfungwa yechipiri iriko mubasa raAlighieri. UyeMuchiitiko ichi, pane kutaura kwegehena nedenga uye nemanera ayo anopatsanura nyika mbiri uye neapo murume anofanira kupfuura kana achida kuregererera zvivi zvake. Hongu, ino nzvimbo hapana mumwe kunze kwepulgatory.
Zvino, iyo yechitatu yakakosha poindi iyo inogona kupupurirwa mune basa raDante ndeyeye yekuzvisarudzira kwevanhu. Hongu, mumwe nemumwe ane kufanorongerwa kwakaratidzwa nenyeredzi, asi, kunyangwe neizvozvo, iye munhu anogona kuzviratidza uye osarudza nzira inofanirwa kufamba nemweya wake, nokudaro achigadzirisa nzvimbo ichaenda mweya wake.
Philosophy kubva pane yetsika uye dzidziso yezvouMwari
Dante, mumabasa ake akanyorwa mukutapwa, inosimudza maonero anonakidza ehunhu hwepakati nepakati hwaivepo kubva pakuona kwouzivi. Kuchamhembe kwemweya wese kunofanirwa kuve, saka, kuti usvike panzvimbo inoratidzirwa nechiedza, nzvimbo yekuzorora iyo Musiki anotambira munhu wese kuti ape huchenjeri chaihwo, ruzivo rwechokwadi. Zvisinei, kusvika ikoko kunoreva kunatswa kwekuve uchitozivikanwa.
Ani naani anozviramba uye nezvose zvinorehwa nenyama, uye achitsvaga nzira kuna Mwari, achipfuura nemuyedzo inodiwa pachinangwa chakadai, iye awana kujekerwa. Ehe, yakakosha medieval dzidziso inonyatso nyorwa muKutonga kwaMwari, uye izvi zvinosimbiswa nemamiriro enharaunda umo Alighieri anofanira kunge aigara. Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti meseji yebasa iri inopfuura nekurasikirwa kweanodiwa Beatriz.
Kupera, saka, ndiko kuzvinatsa uye kusvika kuna Mwari.
Chokwadi, kana chimwe chinhu chichigona kunyatsoonekwa mumabasa aDante, ndiko kudikanwa kwekubvisa zvivi kuitira kuti iye anokwanisa kuwana yakanakisa vhezheni yake uye agone kufunga nezvaMwari. Hapana munhu anoregererwa pazvikanganiso, hapana munhu asingaori, pane imwe meseji yakajeka mubasa. Mumwe nemumwe achiiswa mumiyedzo iyo inogona kumutyora chero nguva, asi kunatswa kunogara kuripo.
Mufananidzo waDante Alighieri - Elsubte-raneo.co Hupenyu, pachahwo, bvunzo, mirage iyo munhu anofunga kuti anozviona chaizvo, asi, muchokwadi, anonyengera. Uyu ndiwo mumwe meseji kubva kuna Dante mubasa rake. Isu tinoona chete fungidziro, yakagadziriswa mamiriro, asi kana Musiki akasvika, mushure mekucheneswa, ipapo kukosha kwechokwadi kunogona kukosheswa ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Philosophy iripo muKudenga kweMweya